Farmaajo oo soo dhaweeyay heshiiska DF iyo Musharixiinta | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo soo dhaweeyay heshiiska DF iyo Musharixiinta
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaa soo dhaweeyay heshiiskii xalay ay wada gaareen Midowga Musharixiinta iyo sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – War ka soo baxay Dowladda ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu soo dhaweeyay qodabadii ka soo baxay shirkii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
“Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey Heshiiska dhexmaray Dowladda iyo Midowga Musharaxiinta oo xalay wadajir loo soo saaray”. ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Dowladda.
Sida qoraalka lagu sheegay Farmaajo wuxuu Ra’iisul Wasaaraha XFS Rooble ‘Rogane’ ku ku bogaadiyay dadaalada uu ugu jiro in dalka uu aado doorasho loo dhanyahay.
“Madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble dadaalka uu ku bixiyey heshiiska wadajirka ah iyo guud ahaan maareynta arrimaha doorashooyinka iyo sida ay uga go’an tahay in la dhaqan geliyo Heshiiskii 17-ka Sebteembar ee ay wada gaareen Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Dawladaha Xubnaha ka ah, ayna meel mariyeen Labada Aqal ee Baarlamaanka”.
Madaxweynaha Waqtigu ka dhamaaday wuxuu sidoo kale ku baaqay in si dhab ah loo xeerayo dhaqan-gelinta Heshiiska doorashooyinka iyo talo soojeedintii Guddiga Farsamada Doorashada Federaal ee ka soo baxday Shirkii Baydhabo.